Onye dike WTN ga-eduga njem nlegharị anya Barbados: Jens Thraenhart, onye isi ọhụụ nke BTMI
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ Barbados » Onye dike WTN ga-eduga njem nlegharị anya Barbados: Jens Thraenhart, onye isi ọhụụ nke BTMI
Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
Barbados bụ ebe pụrụ iche, ndị Barbadadi bụ ndị pụrụiche nke nwere ọtụtụ akụkọ ịkọ. A mara ọkwa onye isi akụkọ taa. Jens Thraenhart, onye ga-elekọta Barbados Tourism Marketing (BTMI) dịka nke Nọvemba 1, n'oge maka Ahịa Njem Ụwa.
Izu anọ gara aga, Canadian/German Jens Thraenhart bụ onye World Tourism Network mere dike njem nlegharị anya.
Ruo ọtụtụ afọ, Maazị Thraenhart bụ onye isi njem nlegharị anya Mekong ma ruo izu gara aga hiwere isi na Bangkok, Thailand.
Taa, a họpụtara Jens Thraenhart ka ọ na-eduzi njem nlegharị anya Barbados
Ugbu a nwoke a maara dị ka Mr. Mekong bụ ọhụrụ Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) Chief Executive Officer.
Site na Bangkok ruo Barbados, nke a ga-abụ gburugburu ọhụrụ maka Jens Thraenhart na ezinụlọ ya.
Ọ bụ Jens Thraenhart, onye na-ahụ maka njem nlegharị anya nke afọ 26, bụ onye "pụtara dị ka onye ndoro-ndoro ochichi kachasị elu site na ọdọ mmiri mbụ nke 178 nke ndị ọkachamara ruru eru si gburugburu ụwa" nzukọ ahụ kwuru na ntọhapụ.
O nwere ihe karịrị afọ 25 nke njem mba ụwa, njem nlegharị anya, na ahụmahụ ile ọbịa nke gbasara ọnọdụ na arụmọrụ, ịzụ ahịa, mmepe azụmahịa, njikwa ego, atụmatụ atụmatụ, na e-azụmahịa. N'oge ọrụ ya, Jens 'azụmahịa na-eme ka ọ dị nkọ na ya na-etolite ma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-eri nri na-aga nke ọma, na-amalite ụlọ ọrụ ịntanetị na-eme njem ntụrụndụ nke dabeere na New York, na ijikwa ebe ntụrụndụ gọlfụ nwere onwe ya na Germany.
Na 2014, Jens Thraenhart bụ Ministri Njem Nleta nke Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, na China (Yunnan na Guanxi) họpụtara ka ọ bụrụ onye isi Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) ka ọ bụrụ onye isi nchịkwa ya. N'afọ 2008, o mebere ụlọ ọrụ azụmaahịa dijitalụ China nke na-emeri ihe nrite, Dragon Trail, wee duru ndị otu azụmaahịa na atụmatụ ịntanetị ya na Canadian Tourism Commission na Fairmont Hotels & Resorts. Kemgbe 1999, ọ bụbu onye isi oche nke Chameleon Strategies.
N'ịbụ onye gụrụ akwụkwọ na Cornell University na MBA-accredited Masters of Management in Hospitality, na nkwonkwo Bachelor of Science si University of Massachusetts, Amherst, na University Center "Cesar Ritz" na Brig, Switzerland, Mr. Thraenhart ghọtara dị ka otu n'ime ha. Otu narị kpakpando na-ebili elu nke ụlọ ọrụ njem njem site na Travel Agent Magazine na 100, edepụtara dị ka otu n'ime ahịa ahịa na ahịa ahịa nke HSMAI 2003 kachasị pụrụ iche na ọbịa na njem na 25 na 2004, ma kpọọ aha ya dị ka otu n'ime Top 2005 Extraordinary Minds na njem Europe. na ile ọbịa na 20. Ọ bụ UNWTO Mgbakwunye Member, PATA Board Member, na gara aga oche nke PATA China.
Maazị Thraenhart nwere echiche zuru ụwa ọnụ n'ezie.
Nhọpụta maka Barbados ga -amalite na Nọvemba 1.
Jens anaghị arụ ọrụ na Caribbean mana ọ na-ebute ndu zuru ụwa ọnụ na Barbados yana mpaghara Caribbean dabere na njem nlegharị anya.
Juergen Steinmetz, Onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa, bụ otu n'ime ndị mbụ kelere Jens n'ọkwá ya na -asị: “Nke a bụ ohere magburu onwe ya ọ bụghị naanị maka Jens, kama maka Barbados na Caribbean. Amaara m Jens ọtụtụ afọ. Nke a agaraghị abụ nhọrọ ka mma. "
Jens bụ onye otu Network Njem Nleta Ụwa na dị nnọọ 4 izu gara aga natara Ndị njem nlegharị anya nturu ugo nke nzukọ zuru ụwa ọnụ a.
"Nke a bụ ụbọchị dị mma maka Barbados na World of Tourism."
Barbados Tourism kwuru, sị: "Nkwuwapụta a ga-ewebata oge ọhụrụ maka nzukọ a, nke ga-ahụ mgbanwe BTMI na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa azụmahịa karịa nke na-emezigharị ọrụ ya iji nwee ike ịsọ mpi n'ọgbọ ọhụrụ nke njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ."
Jens bụ onye isi oche nke abụọ nke ndị otu so na Mgbakwunye nke World Tourism Organisation (UNWTO) wee jee ozi na bọọdụ ụlọ ọrụ gụnyere Pacific Asia Travel Association (PATA), thelọ Ahịa na ire ahịa (HSMAI), na International Federation. nke IT na Njem & Njem Nleta (IFITT), na-eweta mmekọrịta ndị dị mkpa na isi ahịa ebumnuche maka njem nlegharị anya Barbados.
Onye isi oche BTMI Roseanne Myers kwuru na nzukọ a arụlarị nnukwu ọrụ nke imeghe ahịa na ịmalite mmekọrịta azụmahịa.
"Anyị kwenyere na yana ahụmịhe njem nlegharị anya nke Jens nke mba ụwa, ndekọ ndekọ egosipụtara na atụmatụ atụmatụ na echiche azụmaahịa, BTMI ga-esi n'oge ọrịa a pụta ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-aga nke ọma, na-arụ ọrụ nke ọma nke na-eweta abamuru dị ukwuu na ụlọ ọrụ anyị. Akụ na ụba buru ibu,” ka o kwuru.
"Anyị mere ihe ịma aka ịchọta onye kachasị mma maka ọkwa CEO iji nyere aka ịkpụzi ụzọ anyị ga-esi na-aga n'ihu, anyị nwere obi ụtọ na anyị mere nke a, mgbe usoro zuru oke na nke doro anya. Anyị na-anabata Jens na ndị otu Barbados. "
Ndị Barbadia iri abụọ na mmadụ 27 sitere na Caribbean sara mbara so na 178 ndị chọrọ akwụkwọ. Usoro nchọ na nhọrọ bụ Profiles Caribbean Inc. na otu obere kọmitii nke bọọdụ na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ mere. Ụlọ ọrụ ahụ nyekwara ndị mmekọ ụlọ ọrụ mpaghara na mba ofesi ozi ọma nke BTMI.